साताको ब्लगर: गणेश कार्की - MeroReport
साताको ब्लगर: गणेश कार्की
मोरङको शनिश्चरे घर भएका गणेश कार्की हाल काठमाडौंमा बसोबास गर्छन । यहि नै केहि गरौँ भनेर कर्मथलोको रुपमा काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आएको उनी बताउँछन । उनी दमकबाट प्लस टु सकाएर २०६१ सालमा काठमाडौं आए । पोखरा विश्वविध्यालयबाट वातावरण व्यवस्थापन बिज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका गणेश अहिले त्यसैको लागि रिसर्च गरिरहेका छन । उनले साथीहरुसँग मिलेर 'गुड अर्थ' नामक कन्सल्टेन्सी एन्ड रिसर्च सेन्टर खोलेका छन ।
साहित्यिक रचना गर्ने गणेश ब्लगिङ गर्न सार्‍है मन पराउँछन । दैनिक दुइ घन्टा ब्लगिङ गर्ने गणेश आफ्नो वरपर के भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी लिन रुचाँउछन । उनी आफ्नो वरपरको घटनाहरुले गर्दा मनमा उकुसमुकुस भएर ब्लगिङ गर्ने गर्दछन । पानीफोटो' ब्लगमा नियमित ब्लगिङ गर्ने गणेश कार्की साताको ब्लगर बन्न सफल भएका छन :
ब्लगिङमा कसरी आकर्षित हुनु भयो ?
मैले १२ कक्षाको जाँच दिइसके पछि अब केहि गरौँ भनेर कम्प्युटर सिकेको हुँ। त्यतिबेला मैले पहिलो पटक कम्प्युटर छोएको थिएँ । त्यसपछी म काठमाडौं आएँ । एक दिन मैले पत्रिका पढ्ने क्रममा ब्लगको बारेमा पढेँ । पहिला म डायरीमा लेख्ने गर्थेँ । साथीहरु जमघट हुँदा मैले यस्तो लेखेको छु भनेर सुनाउने गर्थेँ । त्यसो भए किन ब्लगमा नलेख्ने त भनेर ब्लगमा लेख्न थालेँ । खासमा मैले डायरी लेख्ने तरिकाले बुझेको थिएँ ब्लगलाई । त्यही कारणले गर्दा ब्लगिङ सुरु गरेको हुँ । जब आफ्नो वरपरको घटनाहरुले गर्दा मनमा उकुसमुकुस हुन्छ त्यही बेला ब्लग लेख्ने गर्छु ।
करिब चार बर्ष जति भयो । ल अब म ब्लगिङ सिक्छु भनेर 'नेपाली मुटु' nepaliheart.wordpress.com मा चलाएको थिएँ । ब्लगिङ गर्ने प्लाट्फर्म चाँही मलाई 'नेपाली मुटु'ले नै दियो । त्यसपछी 'पानीफोटो' चलाउन थालेँ ।
पानीफोटोको अर्थ के हो ?
म गुरुकुलमा खगेन्द्र ज्युले लेख्नु भएको 'पानीफोटो' नाटक हेर्न गएको थिएँ । त्यस नाटकमा एनालग क्यामराको नेगेटिभलाई नेपालीमा पानीफोटो भनिन्छ भनेर अर्थ्याइएको थियो । मैले ठ्याक्कै त्यतिबेला नाम खोजिरहेको थिएँ 'नेपाली मुटु'लाई डट कम बनाउन खोजिरहेको थिएँ । यो नामलाई प्रयोग गर्ने विचार गरेँ । मेरो विचार नेगेटिभको रुपमा छ, मानिसहरुले त्यसलाई जसरी पनि लिन सक्छन । त्यस नेगेटिभबाट निकालिने फोटोको क्वालिटी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा फोटोको पेपर अनुसार फरक पर्छ । नेगेटिभले धेरै विचार निकाल्छन जस्तो लागेर मैले मेरो ब्लगको नाम पानीफोटो राख्ने विचार गरेँ ।
तपाईंको ब्लगको बारेमा केहि भनिदिनुस न ?
सुरुमा त डायरी लेख्ने नै धेय थियो मेरो । तर बिस्तारै के भयो भने मनमा लागेका कुरा बाहेक राजनितीमा, साहित्यमा भइरहेको कुराहरु अपडेट गर्न थालेँ । त्यो बाहेक नेपाली एफएमहरु अनलाईन सुन्न सकिन्छ मेरो ब्लगमा । अनि प्रीतीलाई युनिकोडमा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर राखेको छु । साथै मेरो ब्लगमा अरुले आर्टिकल पनि पोस्ट गर्न सक्नु हुन्छ ।
म दिनहुँ बिहान दुइ घन्टा र बेलुका दुइ घन्टा चलाउने गर्छु । त्यो बाहेक दिउँसो पनि खाली भएँ भने पनि चलाउने गर्दछु ।
तपाईंको ब्लगमा लाईक्स , भिजिटर कतिको आउने गर्दछ ?
राम्रै छ भिजिटर । अहिले त जि पि आर एस बाट पनि इन्टर्नेट चलाउन सकिने भएकोले पनि बढेको हो । अहिले पनि कम्प्युटर , इन्टर्नेटको पहुँच धेरै कम नै छ यहाँ । लगभग पाँच - दश हजार जति भिजिटर छन अहिले सम्म ।
कस्तो प्रतिकिया पाउने गर्नु हुन्छ ?
प्रतिकिया दुबै थरी आउने गर्दछन । कसैले लेखेको कुरामा सहमति जनाउनु हुन्छ भने कसैले यो भएन, एक पक्षिय भयो पनि भन्नु हुन्छ । त्यसैले मिश्रित प्रतिकिया आउने गर्दछ ।
तपाईंको ब्लगमा के के पोस्ट गर्नु हुन्छ ?
शनिवार साहित्य लेख्ने गर्छु । कहिलेकाहिँ पत्रिकामा गल्ती हुने गर्दछन त्यसलाई पनि उल्लेख गरेर लेख्ने गर्दछु । सामान्य अपडेट नै हुन्छन । यही विषयमा लेख्छु भन्ने छैन म जुन विषयमा पनि लेखिरहेको हुन्छु ।
तपाईंलाई के कुराले ब्लग लेख्न प्रेरित गर्छ ?
मलाई कुनै कुराले असर पार्छन भने म त्यही विषयवस्तुमा ब्लगिङ गर्ने गर्दछु । राजनैतिक, सामाजिक कुरा र अन्य सामान्य विषयले पनि लेख्न प्रेरित गर्छ । जस्तो आज युरोको भाउ एक डलरले वा दुइ डलरले बढ्यो त्यसले पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा केहि न केहि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । लिभरपुलले जित्छ कि म्यान्चेस्टरले जित्छ यस्तो कुराले पनि बहस निम्त्याइरहेको हुन्छ । यस्तो विषयमा पनि लेख्ने गर्दछु ।
ब्लगिङ गर्दाको रमाइलो अनुभव केहि छ ?
मलाई ब्लगिङ गर्दा म नयाँ जस्तो अनुभव हुन्छ जहिले पनि । म खारिएँ जस्तो लाग्दैन । जब ब्लग खोल्छु १५-२० लाईक्स आउने गर्दछ, त्यस्तैगरी प्रतिकिया पढ्दा पनि मलाई रमाइलो लाग्छ ।
नेपालमा ब्लगिङको ट्रेन्ड कस्तो देखिरहनु भएको छ ?
जब मैले पत्रिकामा ब्लगिङको बारेमा देखेको थिएँ त्यतिबेला ब्लग भनेको के हो भनेर खोज्न पनि गार्‍हो थियो । तर अहिले ब्लगिङ गर्ने धेरै हुनुहुन्छ । अहिले के भइरहेको छ भने छ भने ब्लगर्स धेरै छन तर निरन्तर ब्लगिङ गर्ने, आटिकल लेखिरहने ब्लगर्स थोरै छन । न्युज साइट वा अरुबाट कपी पेस्ट गर्ने ट्रेन्ड पनि बढी नै छ ।
ब्लग बाहेक अरु के -के सोसिअल नेटवर्किङ साइट चलाउनु हुन्छ ?
सामान्य नेपालमा चलेका साइटहरु जस्तै फेसबुक ट्विटरहरु नै चलाउछुँ ।
के को लागि प्रयोग गर्नु हुन्छ ?
म लिन्क शेयर गर्छु मेरो ब्लगको । आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न प्रयोग गर्छु । एउटा पत्रिकामा खेर जाने हावाबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ भन्ने समाचार छापिएको थियो । तर मलाई चित्त बुझेन किनभने हावा भनेको खेर जाने कुरा होईन, यो त प्राकृतिक रुपमा बहन्छ । अनि मैले अब नेपालमा हावा पनि खेर जाने कुरा भयो अचम्म भयो भनेर लेखेको थिएँ ।
मलाई चित्त नबुझेको कुरा साथीहरुसँग छलफल गरौँ भनेर पनि प्रयोग गर्छु । यस बाहेक कुनै सकारात्मक अभियानलाई साथ दिन, दबाव दिनको लागि पनि प्रयोग गर्दछु । अहिले दुबइमा मृत्युडण्ड पाएका अमर बहादुर बमलाई बचाउनको लागि ट्विटर ,फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेको छु ।
खासै धेरै त होईन । च्याटमा त बस्दिन । दिनहुँ एक घन्टा जसो चलाउँछु ।
ब्लगिङ गर्दा वा सोसिअल नेटवर्किङ साइटबाट त्यस्तो केहि अप्रिय घटना भएको छ ?
त्यस्तो अप्रिय घटना त केहि भएको छैन तर साथी चाहिँ बन्नु भएको छ । उहाँले एउटा समाचार लेख्नुभएको थियो । दाइजो ल्याउँदा एउटा बित्तिय संस्थानको शेयर दिइयो एकदमै राम्रो काम गर्नु भयो भनेर । मैले यो समाचार यसरी आउनु हुँदैनथ्यो दाइजो जुनसुकै तरिकाले दिए पनि गलत हो नि भनेर लेखेको थिएँ । पछि उहाँ राम्रो साथी बन्नु भयो ।
त्यस्तै एकचोटी एकजनाले एउटा आर्टिकल स्काउट लोकतान्तत्रीक हुन सकेन भनेर लेख्नु भएको थियो । त्यसको शीर्षक स्काउटमा गणतन्त्र आएन राजसंस्था बाँकी नै छ भनेर राख्नु भएको थियो । अनि मैले के गल्ती गरेको थिएँ भने स्काउटको लोगोमा श्रीपेच राखिदिएको थिएँ । त्यतिखेर मलाई फोन आएको थियो । यो सुधार्नुहोस नभए यो पुलिस केस हुन्छ अझ अरु पनि गर्न सक्छौँ भन्नु भयो । र मैले माफी मागेको थिएँ ।
ब्लगिङ गर्दा अरुको कन्टेन्ट कपी पेस्ट गर्ने जस्ता कार्य देखिएका छन । ब्लगिङ गर्दा केहि नियम , अचारसंहिता हुनु पर्छ कि पर्दैन ?
यस्तो कपी-पेस्ट गर्ने प्रवित्ति धेरै देखिएको छ । तर यसबाट आफ्नो सृजनसिलता त मर्छ नै साथै यसरी निरन्तरता दिनै सकिदैन । कपी-पेस्टलाई रोक्न सके धेरै राम्रो हो । तर के कपी गर्ने के नगर्ने भन्ने पनि विवादको विषय हुन सक्छ । जस्तै नैतिक सहकार्य, एकबद्दता जनाउँनको लागि पनि कपी-पेस्ट गरिन्छ । तर स्रोत खुलाउनु पर्छ । र स्रोत खुलाउँदा आफु खुम्चिदैन बरु अरुले पत्याउछन ।
अचारसंहिता त हुनु पर्छ तर ठ्याक्कै यही हुनु पर्छ भन्ने होईन । ब्लग स्वतन्त्र नै हुनु पर्छ । ब्लगलाई कुनै एउटा परिधीमा बाँध्ने भन्दा स्वन्त्र नै भएको राम्रो हुन्छ । स्वन्त्रता हुने भन्दैमा मनमा जे आउँछ त्यही लेख्न चाहिँ हुँदैन । एउटा नैतिकता चाहिँ हुनु पर्छ ।
नयाँ मिडिया र मुलधारको मिडियामा के फरक छ ?
मुलधारको मिडियाको केहि मापदन्ड हुन्छ शब्दहरुमा , विषयवस्तुमा । लेखेको कुरा परिमार्जित भएर आउने गर्दछ । मुलधारमा नआएका धेरै कुरा अल्टर्नेटिभ मिडिया र सोसिअल नेटवर्किङ साइट्मा पाउन सकिन्छ । जे लेखिन्छ त्यही नै आउने गर्दछ ।
तर सोसिअल मिडियामा अहिले अश्लिलता देखिएको छ । रिस उठ्यो भन्दैमा त्यस्तो त गर्नु त भएन नि ।
व्यक्तीगत रुपमा तपाईंलाई सोसिअल नेटवर्किङ साइटले केहि प्रभाव पारेको छ ?
हाम्रो चेतना स्तर यतिसम्म छ , यो कुरालाई यसरी लिँदा रहेछन मनिसहरुले भनेर बुझ्न मद्दत गर्छ । मैले कसरी सोच्दो रहेछु भनेर अरुलाई बुझ्न पनि सहयोग गर्छ । ब्लग लेख्दा म सचेत भएर लेख्छु । म अलिकती जिम्मेवार पनि भएको जस्तो लाग्छ । धेरै साथीहरुले मेरो ब्लग नियमित पढ्ने गर्नु हुन्छ त्यसैले मैले यो सत्य तथ्य हो यसलाई मैले लेख्नु पर्छ भन्ने बोध चाहिं हुन्छ ।
नेपालमा सोसिअल नेटवर्किङ साइटलको प्रयोगकर्ता बढीरहेको छ ? यस बारेमा के भन्नु हुन्छ ?
यो त पक्कै राम्रो कुरा हो । जि पि आर यस ले गर्दा मोबाइलबाट इन्टर्नेटको प्रयोगकर्ता धेरै बढीरहेको छ । खास गरी फेसबुका प्रयोगकर्ता धेरै छन । फेसबुकले के गरिरहेको छ भने साथीहरु पुराना हुन दिएन ,जुन ठाउँमा भ्ए पनि नजिकै हुने भयो । कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुराको तुरुन्तै अपडेट हुन पाइयो । जव कुनै पनि सुचना थाहा पाइसके पछी पत्रिकामा हेर्दा त्यो खबर बासि जस्तो लाग्छ किनभने त्यो कुरा अन्लाईनमा हेरिइसकेको हुन्छ । तर सोसिअल नेटवर्किङ साइटल धेरै जसो हाइ हेल्लोमा नै सिमित छ ।
अहिले हामी सोसिअल नेटवर्किङ साइटमा यती धेरै बानी परीसकेको छ । एकैछिन सोचौँ यो भएन भने के हुन्छ होला ?
अहिले यो नहुनु भनेको एउटा बन्द कोठामा किताब पनि नहुनु, झ्याल ढोका केहि नभएको कोठामा लगेर राखिदिएको जस्तै हुन्छ । किनभने तपाईंले केहि गर्न पाउनुहुँदैँन्, बाहिर के भइरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैँन । त्यो राम्रो पक्ष हो । तर अहिले सोसिअल नेटवर्किङ साइट नहुने हो भने मान्छे बाहिर निस्किन्थ्यो, आँगनमा झार निस्केछ, किचेन र्‍याक फोहोर भएछ भनेर सफा गर्थ्यो ।
यसको नकारात्मक कुरा के के हुन ?
तपाइलाई संसारभरको कुरा थाहा हुन्छ तर घरको कुरा थाहा हुँदैन । जहाँसम्म आँखाले देख्नु हुन्छ त्यहाँको थाहा हुँदैन, जहाँ आँखाले देख्नु हुन्न त्यहाँको बारेमा सबै थाहा हुन्छ । आफु ठुलो भएको कि खुम्चिएको भन्ने छुट्याउन गार्‍हो हुन्छ । फुर्सदको समयमा साथीसँग च्याट गर्‍यो बिभिन्न साइट चलायो धेरै कुरा थाहा हुन्छ । तर तल ढल फुटिरहेको थाहा हुँदैन । आफु वरिपरि के भइरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैन ।
यस्तो बिभिन्न नकारात्मक कुरा हटाउन के गर्नु पर्छ ?
यो त मानविय गुण नै हो । अहिले नयाँ छ के - के न पायो जस्तो हुन्छ । बिस्तारै नराम्रो कुरा हट्दै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
ब्लगिङ गर्न चाहने नयाँ ब्लगर्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
कपी पेस्ट सकेसम्म नगर्नुस । त्यसले तपाईंको सृजनशितलता मार्छ । जस्तो जाँचमा चिट लग्यो भने चिट सार्न झन ढिला हुन्छ । बरु आफैँ लेख्यो भने चाँडो हुन्छ । गर्नै परे स्रोत खुलाउनुहोस ।
राम्रो आर्टिकल आइरहेको हुन्छ । नयाँ नयाँ अपडेट आइरहेको हुन्छ । स्पष्ट विचार राख्न पाइन्छ । मलाई राम्रो लाग्छ मेरोरिपोर्ट ।
गणेशको ब्लग लिङ्क : http://www.paniphoto.com/
Comment by Durga neupane on May 12, 2012 at 11:07am
Comment by Ajeeta Sigdel on May 10, 2012 at 12:57pm
Comment by Indra Dhoj Kshetri on May 10, 2012 at 11:07am
बधाई छ गणेशजी ।
Comment by एसवी गौतम on May 10, 2012 at 10:54am
congratulation ganesh sir !
Comment by Dr Anubha Singh on May 10, 2012 at 4:10am
badhai cha sathi lai..